Lix Xaqiiqo Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Ka Hor Xafladda Caawa Lagu Bixinayo Abaalmarinta Ballon d’Or. - Laacib.net
Lix Xaqiiqo Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Ka Hor Xafladda Caawa Lagu Bixinayo Abaalmarinta Ballon d’Or.
Majaladda France Football Magazine ayaa go’aansatay iney xaflad u sameyso abaalmarinta Ballon d’Or oo ay bixiyaan sanad walba waxeyna soo bilaabeen nus qarni ka hor, xaflad weyn ayey qaban qaabinayaan kana dhici doonta magaalada Paris.
Ballon d’Or waa mid ka mid ah Jaa’izooyinka ugu sareeya heerka kubadda cagta waxaana loo tixgelin jiray xiddiga yurub ka hor inta aysan la midoobin FIFA Best Player of the Year sanadkii 2009 markaas oo loo bixiyay labadii abaalmarin FIFA Ballon d’Or.
Heshiiskii ay galeen FIFA iyo France Football Magazine ayaa dhamaaday 2015, waxeyna sanadkii lasoo dhaafay bixiyeen markii ugu horeysay, waa markii ugu horeysay oo xaflad loo qabanayo abaalmarintaan madama Ronaldo loogu geeyay Spain sanadkii hore, ka hor inta aysan la midoobin FIFA iyo kadib markii ay kala jabeen wax xaflad ah looma sameyn jirin.
7-da December ayeyna dhacdada dhici doontaa [Khamiis].
Halkee Laga Daawan Doonaa?
Kaliya waxaa xuquuqda leh TV-yo u gaar ah majaladda L’Equipe, kuwaas oo qaatay baahinta.
Yaa Daadihin Doona Xafladda?
Xafladda waxaa daadihin doona xidigii hore Tottenham Hotspur iyo xulka qaranka France David Ginola.
Sidee Loo Go’aaminayaa Guuleystaha?
France Football magazine ayaa dooratay 173 wariye oo ay ka keentay daafaha dunida, kuwaas oo codeyn doona, waa codeyn xiran oo aan u furneen taageerayaasha, waxeyna daawadayaasha ka arki doonaan wax walba baraha bulshada.
“The Best” Maahan “Ballon d’Or”
Yeysan isaga kaa qaldamin labada abaalmarin “The Best” waxaa bixiya FIFA, halka Ballon d’Or ay bixiso France Football Magazine, Ronaldo ayaa ugu cad-cad kaas oo barbareyn kara Messi oo shan jeer horay u qaaday.
2009 ilaa 2015 ayey labada abaalmarin mideysnaayeen, balse haatan waa kuwa kala madax banaan oo aan isku mid aheyn.
Yaa Ku Hardamaya?
Waxaa ku hardamaya oo midkood la siin doonaa Ronaldo & Messi, walow Cristiano uu yahay kan ugu cad-cad madama uu wax walba ku guuleystay, waxaana ku jira dhawr xidig oo liiska kusoo baxay mana lahan Short List ka kooban sadex xidig.
Tartamayaasha Lasoo Xulay:
Abaalmarintaan markii ugu dambeysay oo xidig Ingiriis ah uu hanto waxey aheyd 2001 markaas oo la siiyay Michael Owen oo ka tirsanaa Liverpool.